Matatu matatu matsva eNike eApple Watch ari padyo | Ndinobva mac
Chiziviso chepamutemo chemabhande matsva chakaitwa naNike pachayo nguva ino. Mune ino kesi, kune matatu matsva tambo tambo uye mamodheru. Nike Sport uye Nike Sport Loop kune vese vashandisi vanoda kuvanakidzwa paApple Watch yavo, kunyangwe vari iyo Nike modhi kana kwete, sezvo zviri pachena kuti zvinowirirana.
Pakutanga, Nike pachayo yakatengesa aya matsva esambo mamodheru "chete" kwemazuva mashoma pawebhusaiti yepamutemo ndokuzozvitengesa kune vamwe vashandisi pawebhusaiti yeApple. Zvinotaridza kuti muchiitiko ichi Chishanu chinotevera, Mbudzi 16, munhu wese anoda achakwanisa kuzviwana kubva kune yepamutemo chitoro cheNike nekunyoresa kuri nyore pawebhu, hapana chikonzero chekuve neApple Watch Nike + wachi yemhando.
Mutengo wacho hauzivikanwe asi uchazove iwo wepamutemo
Kazhinji rudzi urwu rwematambo rune mutengo wepamutemo ungangoita makumi mashanu neshanu euros, saka kunyangwe chiri chokwadi kuti hapana akataura chero chinhu panguva ino, vanotarisirwa kuvhurwa pamutengo uyu. Sezvatiri kutaura, mutengo wekuburitsa haunyatso kuzivikanwa asi iyo yatakataura ndiyo ichave yakachengeteka.
Iwo mamodheru echiitiko ichi matatu, imwe ye Nike Sport (yakajairika yemakomba eNike) uye maviri mhando Kufungisisa Sport Loop senge nyowani nhema.
Rima rakasvibirira iyo Nike Sport (Olive Flak)
Pinki yeNike Sport Loop (Smokey Mauve)
Chiedza chebhuruu cheNike Sport Loop (Yekudenga Teal)
Mhando nhatu nyowani dzinoshandiswa nevashandisi kubva paNike's webhusaiti. Chinhu chakanaka pamusoro perudzi urwu rwe tambo ndechekuti ivo vanonyatsogadzikana kupfeka uye kugadzirisa zvakakwana kune yedu ruoko. Ini pachangu ndine iyo nhema Mutambo Loop yakauya neiyo Series 4 Nike + uye ndinofara nazvo. Zvirokwazvo mukati mechinguva tinogona kuwana aya mavara akafanana ne "zvisina kufanira" zvitoro nemitengo yakagadziridzwa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matatu matsva eNike eApple Watch ari padyo
Iyo HomePod inopinda muchikamu chekudzoreredzwa uye yakasimbiswa neApple